‘नेप्से वाच’को सातौं अंक आयो, फेरि पनि निःशुल्क पढ्ने मौका नगुमाउनुहोस् ( लिन्क सहित ) – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १८:३२ Basanta Khanal	0 Comments	nepse watch
काठमाडौं :नेप्से वाचन्यूज लेटरको लगातार नयाँ संस्करणहरु आउनेक्रम जारी छ । यसैक्रममा सातौं नयाँ संस्करण पनि प्रकाशित भएको छ । सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई सधैं सूसुचित गराइराख्न यसले निकै सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । पुँजी बजारका प्रमुख घटनाक्रमका साथमा प्रमुख कम्पनी र नेप्सेको समूहगत विश्लेषणले लगानीकर्तालाई अपडेट गराइन राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस न्यूज लेटरमा साताभर सेयर बजारमा भएका प्रमुख गधिविधिहरु समेटिएका हुन्छन् । सेयर बजारमा साताभर के–के भयो ? अब आगामी साता के होला ? मार्केट कता जाला ? भन्ने लगायतका महत्वपूर्ण पक्षहरु पनि यो अंकमा समावेश भएको छ । यसैगरी, नेप्सेको ट्रेन्ड विश्लेषण पनि गरिएको छ । सेयर बजारमा सूचीकृत संस्थाहरुमध्ये महत्वपूर्ण एक कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण पनि प्रस्तुत भएको छ ।यसका साथमा नेप्सेको सेक्टरवाइज अवस्था पनि उल्लेख छ । यतिमात्र होइन, देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अवस्था (म्याक्रोइकोनोमिक्स) कमोडिटी मार्केट, विश्व सेयर बजारको भलक पनि यसमा समावेश भएको छ । यसबाहेक सेयर बजारका अन्य थुप्रै समसामयिक र महत्वपूर्ण सूचकहरु पनि यो अंकमा समेटिएका छन् ।
यो न्यूज लेटर ‘स्मार्ट वेल्थ प्रो’का प्रयोगकर्ताले निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने छन् । यस्तै, यो न्यूज लेटर केही समयका लागि नेपाली पैसाको प्रडक्ट सेयर म्यानेजर तथा अन्य बेसिक प्रयोगकताहरुले पनि निःशुल्करुपमा पढ्न पाउनेछन् । साप्ताहिकरुपमा यो न्यूज लेटर पढनका लागि स्मार्ट वेल्थ प्रो लग इन गर्दै रहनु होला । नेप्से वाच न्यूज लेटर स्मार्ट वेल्थ प्रोडटकममा गएर पनि हेर्न सकिनेछ ।
‘नेप्से वाच’को नयाँ अंक पढ्नको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
← अस्पताल जान समस्या भएकाे छ ? निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरू (फोन नम्बरसहित)
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – १९ बैशाख २०७८ आइतवारको राशिफल पढौं →
प्रचण्डले बोलेको अभिव्यक्ति विवादमा, पार्टी संघसंस्थाद्धारा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना (भिडिओसहित)
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:२६ Basanta Khanal	0